Waa Tobanki Habeen Ee Bisha Ramadaan Ugu Dambeysay .. Fadliga Habeenka Leylatul Qadarka
Waxaaa ku dhex jirnaa tobankii habeen ee bisha Ramadan ugu danbeysay, tobankaas habeen oo ay ku jirto habeen la yiraahdo "Habeenkii Leylatul-Qadri" .. Laylatul-Qadriga waa habeen fadligiisu aad iyo aad u wayn yahay, waxaa ka mid ah:
(1) Waa habeen camalka la qabtaa uu ka khayr badan yahay midka la qabto kun bilood (yacni 83 sanno iyo 4 bilood) oo habeenkaas uusan ku jirin.
(2) Waa habeenkii Quraanka Lawxul-Maxfuudka laga soo dejiyey, iyadoo la keenay meel la yiraahdo gurigii Cizziga iyo Sharafta, dabadeedna qayb-qayb Nabiga SCW loogu soo dejiyey, muddo saddex iyo labaatan sano gudohood ah.
(3) Waa habeenka Lawxul-maxfuudka laga soo dejiyo oo laga soo qaado sannadka waxyaabaha dhacaya, sida wixii dhimanaya, wixii dhalanaya, risiqa iwm, iyadoo loo keenayo oo loo dhiibayo malaa'igta u xilsaaran arintaas.
(4) Waa habeen malaa'igta la soo dejiyo, iyadoo uu ka mid yahay Malaku Jibriil, habeenkaa Allaah SW ayaa karaameeyey, kitaabkiisa ku xusay. Waxaana qof kasta oo muslim ah u haboon ah inuu ku dadaalo sidii uu u haleeli lahaa habeenkaas qaaliga ah, oo uusan u seegi lahayn, habeenkaasi waa habeen Ilaaheey uu ummaddaan u gaar yeelay, qofkii haleelana khayr dhamaantiis ayuu haleelay, Rasuulkuna SCW isagoo fadliga habeenkaas ka hadlaya ayuu wuxuu yiri: "Qofkii Laylatul-Qadriga kaca (yacni habeenkaa cibaado sameeya) isagoo aaminsan, ajar iyo xasanaadna Ilaahey ka dalbanaya waxaa loo dhaafayaa dambigiisii hore". Waxaa wariyey Bukhaari iyo Muslim.
Habeenkaas maadaama uu yahay mid fadli wayn leh, ahna mid aad iyo aad qofka muslimka ah ugu muhiim ah, ayaa asaxaabtu waxay jeclaysteen inay ogaadaan habeenka uu yahay, qaar iyaga ka mid ahi waxayba ku riyoodeen inay ku jirto tobanka ugu dambeeya soonka, markaa ayaa Nabiga SCW wuxuu yiri: "Ku dadaala Laylatul-Qadriga habeennada tirada is-dheer (kisiga) ah, sida 21, 23, 25, 27, iyo 29, oo ku jiraan tobanka ugu dambeeya Ramadaanka." Waxaa wariyey Bukhaari iyo Muslim.
Maadaama asaxaabtu aysan ogolayn in waqti muhiimaddaas lehi uu dhaafo, ayaa Caa'isha oo ahayd xaaskii (sowjadii) Nabiga SCW waxay Rasuulka SCW ku tiri: Haddii aan ogaado habeenka uu yahay Laylatul-Qadrigu maxaan leeyahay? Markaas ayuu ku yiri: Waxaa aqrisaa ducadatan:
oo ay macnaheedu tahay "Ilaaheeyoow waxaad tahay Ilaah cafin badan, jecelna cafinta, ee i cafi." Waxaa xaddiiska wariyey Axmed Ibnu Maajah iyo Tarmidi.